Been abuurka lacagta Euro ee gacanta lagu dhigo oo kor u kacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Lacagta been-abuurka euro-oga oo kor u kacday 120%. sawir: Claudio Bresciani / TT
Been abuurka lacagta Euro ee gacanta lagu dhigo oo kor u kacday
In la mamnuuco isticmaalka euro ee dukaannada
La daabacay tisdag 21 mars 2017 kl 14.00
Sannadkii ina dhaafay ayey bar lacagta been abuurka ee gacanta ay ku dhigtay hayadda NFC (Nationellt forensiskt centrum) ahayd lacagta euro-oga.
Middaasi ayay ugu wacan tahay iyada oo ey kor u kaceen kooxaha ka macaasha lacagaha aan dhabta ahayn iyo kor u kaca ganacsiga lacagaha been abuurka ee looga ganacsado internet-ka.
Michael Johansson, waa sarkaal ka howl-gala xarunta hayadda NFC ee magaalada Linköping.
– Lacagta Euro-oga ayaa qayb ballaaran ka ah lacagaha baarista lagu sameeyo ee dalka Sweden.
Sannadkii ina dhaafay ee 2016 ayay hayadda NFC baaris ku sameeysay 660 waraaqood ee lacagta euro oo been abuur ah. Waana tiro kor u kacday 112% muddo laba sannadood gudahood ah. Qiimaha guud ee lacagtaasi ayaa u dhiganta qiyaastii nus malyan ee koronka iswiidhishka.
Lacagahan ayaa ciidanka ammaanka ka soo gaarey goobaha lacagaha lagu sariffo ee dalka, middaasina oo macnaheedu tahay in muddo lagu ay lacagtaasi ku jirtay suuqa ganacsiga.
– Lacag badan oo euro ah ayaa xarunta nagu soo gaara, middaasina oo ay ugu wacan tahay maadaama lacagtani aad looga isticmaalo caalamka.
– Waana midda sababta iney xiiseeyaan kooxaha ka been abuura lacagaha si baaxad leh adduunka dacalladiisa.
Sidoo kale waxaa kor u kacay been-abuurka lacagaha kale ee soo gaara xarunta NFC, tusaale ahaan waxaa xarunta soo gaara lacag been abuur ah ee Yen, ahna lacagta laga isticmaalo dalka Shiinaha. Iyadoona kor loo qaadey muddo laba sannadood ah baarista lacagta Yen-ka 60%.
– Nasiib-darro waxay u egtahay iney iswiidhish badani dib uga soo laabtaan iyaga oo sita lacag been abuur ah safarro ey ku tageen dalka Shiinaha. Kolkii ey lacago dhab ah ku bedesheen lacago been-abuur ah.
Maanta ayey dalka Sweden ka jiraan dukaanno lagu qaato lacaga ajnabiga. Waana mid sahlaysa sidii ey suuqa ganacsiga ku soo geli lahayd lacag been-abuur ah.
Waana fikir ku soo xoogeeysanaya Michael Johansson oo ka howl-gala xarunta NFC.
– Arrin wanaag-san ayuu ahaan lahaa in la qiimeeyo inaan suuqa ganacsiga lagu isticmaalin lacagta euro-oga iyo lacagaha ajaaniibta, isla-markaana loo daayo howshaa ka war-qabkeeda rugaha sarifleyaasha.
– Waxay tallaabadaasi aad u dhimi lahayd cabsida laga qabo lacagaha been-abuurka lagu sameeyo.